Ugcino lwezifo- Ilungelo laseMelika lokwazi
“Veteran investigative journalist Carey Gillam tells Johnson’s story in her latest book, “The Monsanto Papers,” a fast-paced, engaging account of how Monsanto and Bayer’s fortunes changed dramatically in such a short span of time. Despite the subject matter — complicated science and legal proceedings — “The Monsanto Papers” is a gripping read that provides an easy-to-follow explanation of how this litigation unfolded, how the jurors reached their verdict and why Bayer appears to be, in effect, throwing up a white flag now.” — ISt. Louis Post-Dispatch
Umgwebi waseSt. Louis uyala uMonsanto ukuba acothise elinye ixesha lokuvavanywa komhlaza
ezaposwa ngomhla Agasti 13, 2019 by UCarey Gillam
Umnqweno kaMonsanto wokumisa olunye uvavanyo oluzayo lomhlaza kwi-Roundup eSt. Louis aluphumelelanga- ubuncinci okwangoku- njengejaji uyalele ukuba ityala elisetelwe u-Okthobha liza kuqhubeka.
Emva kokuva impikiswano kaMonsanto kwiveki ephelileyo efuna ukuqhubeka kwityala likaWalter Winston v. Monsanto, iJaji yeNkundla yeSekethe iSt. Louis uMichael Mullen wasikhaba isicelo sikaMonsanto wathi ityala liza kuqala ngo-Okthobha 15. UMgwebi uMullen uthe ukufakwa kunye nokufunyanwa kwelityala kufuneka iqhubeke kude kube ngu-Septemba 16 ngenkqubo yokukhetha ijaji ukuqala ngo-Okthobha u-10.
Ityala, ukuba liyenzeka, iya kuba lixesha lesine uMonsanto kuye kwafuneka ajongane nezigulana ezinomhlaza kwinkundla yokuphendula izityholo zokuba iimveliso zayo zokubulala ukhula ziRoundup zibangela i-non-Hodgkin lymphoma kwaye inkampani iye yafuna ukufihla ulwazi malunga nomngcipheko. IMonsanto waphulukana nezilingo ezintathu zokuqala kwaye abagwebi banikezela ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi kumonakalo, nangona amabhaso amathathu ejaji ancitshisiwe ngabagwebi bamatyala.
Ityala likaWinston liza kuba lityala lokuqala ukwenzeka kwidolophu yakudala yaseMonsanto yaseSt. Ngaphambi kokuthengisa kwinkampani yaseJamani iBayer AG kunyaka ophelileyo, iMonsanto yayingomnye wabaqeshi abakhulu baseSt.
Ityala elalilindeleke ukuba liqale eSt.
Emva kokuqhubeka kwetyala kubhengezwe kwiveki ephelileyo, imithombo ithi inkampani kunye namagqwetha abamangali baya kwiingxoxo ezinzulu malunga Ulungelelwaniso olunokubakho lwehlabathi. Okwangoku, ngaphezulu kwe-18,000 yabantu bayamangalela iMonsanto, bonke betyhola ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kweRoundup kwaye iMonsanto yagquma ubungqina bengozi. Umntu othile udadile ngobuxoki isibonelelo sokuhlawula esinokubakho se- $ 8 yezigidigidi, sibangela ukuba izabelo zeBayer zinyuke ngokukhawuleza.
I-Bayer ijongene nexabiso lesabelo elinoxinzelelo kunye nabatyali mali abonileyo ukusukela nge-10 ka-Agasti, isigqibo sejaji se-2018 kwilingo lokuqala lomhlaza we-Roundup. Ijaji yanikezela umgcini-ndawo waseCalifornia UDewayne "Lee" Johnson $ 289 yezigidi kwaye yafumanisa ukuba iMonsanto yasebenza ngolunya ekucinezeleni ulwazi malunga nemingcipheko yeherbicides yayo.
IMonsanto babhena isigwebo kwiiNkundla zezibheno zaseCalifornia, kwaye uJohnson wenze isibheno ngokunqamleza efuna ukubuyisela ibhaso lakhe lama- $ 289 ezigidi kwibhaso elincitshisiweyo le- $ 78 yezigidi ebekwe ngumgwebi wetyala. Eso sibheno Iyaqhubeka kunye neengxoxo zomlomo kulindeleke ngoSeptemba okanye ngo-Okthobha.
Ngokubhekisele kwimeko yaseSt. Louis, ityala likaWinston lisengaphoswa. Ityala linabamangali abaninzi, kubandakanya nabanye abavela ngaphandle kwendawo, kwaye loo nto inokubeka ityala kwizinwele ezinqamlezileyo zoluvo olukhutshwe kwangoko kulo nyaka yiNkundla ePhakamileyo yaseMissouri, enokubopha ityala likaWinston ngokungapheliyo, ngokutsho kwababukeli bezomthetho .
I-EPA yeTrump ine "Monsanto's Back"
Kwiindaba ezahlukeneyo, i-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) kwiveki ephelileyo ikhuphe upapasho ndaba zekhampani ukwazisa ukuba ayizukuvuma iilebhile zokulumkisa ngomhlaza ezifunwa ngurhulumente waseCalifornia malunga neemveliso ezithile zeherbicide ezisekwe kwi-glyphosate. I-EPA ithe ilebheli ethi i-glyphosate "yaziwa ngokubangela umhlaza," ayiyonyani kwaye ayikho semthethweni, kwaye ayizukuvunyelwa ngaphandle kolawulo lwaseCalifornia oluyalela ukuba kufakwe iilebheli.
“Kukungakhathali ukufuna iilebheli kwiimveliso ezingachanekanga xa i-EPA isazi ukuba imveliso ayibeki mngcipheko womhlaza. Asizukuyivumela inkqubo yaseCalifornia enesiphene ukuba inyanzelise imigaqo-nkqubo yomanyano, utshilo uMlawuli we-EPA u-Andrew Wheeler.
Uluhlu lwaseCalifornia lwe-glyphosate njengesixhobo esaziwa ngokubangela umhlaza safika emva kwe-Arhente yeHlabathi yezeMpilo kwiHlabathi yoPhando ngomhlaza (IARC) yabeka i-glyphosate ngo-2015 njenge- “mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.”
Inyani yokuba i-EPA ithatha le meko, kwaye yafumanisa kunyanzelekile ukuba ikhuphe ingxelo, kubonakala ngathi iqinisekisa amaxwebhu angaphakathi eMonsanto afunyenwe ngokufumanisa isimangalo esibonisa ukuba i-EPA yayikholelwa ukuba "ndinomqolo kaMonsanto”Xa kuthethwa ngeglyphosate.
Kwi umbiko iqhotyoshelwe kwi-imeyile kaJulayi ka-2018 kwisicwangciso-qhinga sehlabathi seMonsanto esisemthethweni uTodd Rands, icandelo lezobuntlola lobuchule kunye nenkampani yeengcebiso Hakluyt uxele kuMonsanto oku kulandelayo:
"Umcebisi womgaqo-nkqubo wasekhaya kwi-White House wathi, umzekelo: 'Sinomqolo kaMonsanto kummiselo wezibulali zinambuzane. Sikulungele ukuya ku-toe-to-toe nakweyiphi na imbambano abanokuba nayo, umzekelo, i-EU. IMonsanto akufuneki yoyike nawuphi na umgaqo owongezelelweyo kolu lawulo. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, isifo, EPA, ukutya, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, trial